MIKARATRA fonosana Aerospace anglisy FSX & P3D - Rikoooo
Downloads 21 597
Mpanoratra: modely nosoratan'i Brian Franklin (Simshed). Sokajy sy fitaovana nataon'i Jim Cooper, fampifanarahana FSX/P3D nataon'i Philippe Wallaert, Rikoooo
Nohavaozina tamin'ny 29 / 08 / 2017: tontonana 2D vaovao namboarina ho an'ny efijery mivelatra (16 / 9), ampiasao miaraka ankehitriny Prepar3D v1, v2, v3 ary v4. Dikan-tsarimihetsika 10 otomatis
Ny Hawker Siddeley Nimrod dia sambon-dranomasina amperinasa ao amin'ny Royal Air Force. Izany no mpandimby ny Avro Shackleton. Mifototra amin'ny De Havilland Comet toy ny Hawker Siddeley (ankehitriny ny BAE Systems napetraka) dia niova.
Ity fonosana feno ity dia ahitana ny modely Nimrod MR1, MR2 ary R1. Betsaka ny mari-pamantarana (fanamboarana) ho an'ny modely tsirairay.
Ny fanampiny dia natao hifehezana avy amin'ny tabilao virtoaly (VC) fa misy koa ny panondro 2D. Ankafizo.
Teknolojia maoderina, sambo amboara lehibe. Natao voalohany tamin'ny May 23, 1967, ny kômety, ilay prototype voalohan'ny Hawker Siddeley Nimrod. Ilay tovovavy faharoa dia ny toerana FLM volana volana taty aoriana.
Na izany aza, ny fitiliana ara-dranomasina ao Nimrod dia manohy ny asa lehibe ataony. Ny Nimrod dia manana iraka nahomby an-jatony
Any an-tsambo, na ny rafitra fitiliana, ny onjam-be, ny fanaraha-maso ny fiaramanidina na ny fitaovana fanaraha-maso dia tsara toy ny manampahefana sy ny NCO izay mampiasa
Fitaovana afaka mandeha misionera haingana sy lava, ny Nimrod MR Mk 2 dia manana rafitra rafitra maoderina, anisan'izany ny radar, magnetometer ary rafitra iray ho an'ny fanodinana dizitaly ny data acoustic.
Izy io dia afaka mitondra ny fiampangana nokleary lalina na fampiasam-batana na torpedoes na harena an-kibon'ny tany amin'ny fitaovam-piadiana midadasika be. Ity fitaovana ity koa dia ahitàna ireo teboka eo ambany elatra izay afaka mifatotra amin'ny balafomanga na rivotra manohitra ny sambo.